सात समाचार.... - Goraksha Online
सरोकारवालाहरुले स्पष्ट जानकारी पाएर पनि समाधान हुन नसकेका दाङ जिल्लाका मुख्य चार समाचारहरुले प्राथमिकता नपाएको यहाँका नागरिकहरुले व्यापक गुनासो गर्दै आएका छन् । गोरक्ष दैनिकमा जिल्ला एवं जिल्ला बाहिरबाट यहाँ आएका नागरिकहरुले गरेका गुनासाहरु हुन् । जुन गुनासाहरुले समाचारमा प्राथमिकता नपाएको नागरिकहरुले नै गोरक्षलाई सुझाएका छन् ।
पत्रेखोला : समाचार नं. १ । पत्रेखोलामा विगत ६ बर्षदेखि निर्माणाधीन पुल बन्न नसक्नु त दुर्भाग्यकै विषय भयो । तर पत्रेखोलाको ठीक पश्चिमपट्टिको बाटो क्रस गर्ने सवारी साधनलाई मुस्किल छ । कालोपत्रे भत्कँदै सोनापुर सिमेन्ट पुग्न थाल्यो । यो घोराही–तुलसीपुर सडक हो वा घोराही—होलेरी सडक ? सडक डिभिजन कार्यालय, यहाँका पालिकाका प्रमुखहरु तथा सिडियो सापले देख्नुभएको छैन कि । एक पटक यी सबै निकायका अधिकारीहरुले पत्रेखोला पश्चिमको सडकखण्ड नजर गर्ने कि ?
तुलसीपुर चोक : समाचार नं. २ । घोराहीको मुटु तुलसीपुर चोकमा तुलसीपुरतर्फबाट आएका कार चालकहरुले यो चोक काट्नै मुस्किल छ । सायद सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा अधिकारीहरुले यो चोक कार वा मोटरसाइकलमा क्रस गरेको भए थाहा हुन्थ्यो कि ! घोराहीका नगर प्रमुखलाई पनि यसको दुर्दशावारे जानकारी हुनुपर्ने होइन र ? बर्षातभरी हिलाम्मे, हिउँदभरी धुलाम्मे मात्र होइन, बाह्रै महिना खाल्डैखाल्डा । दक्षिण साइडको आधा भाग कालोपत्रे, उत्तरपट्टिको हिलाम्मे र धुलाम्मे किन ?
पुलभन्दा खोलै सजिलो : समाचार नं. ३ । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको सक्र्रामखोला पुल निर्माण भएको हो वा निर्माण सम्पन्नै भएको हो । नागरिकहरुलाई थाहा भएन । अचेल त पुलबाट सवारी चलाउनुभन्दा खोलाबाटै सवारी चलाउन सहज छ । किनकि पुलमा ब्रेकर राखिएको त यो नमुना पुल नै हो । पुलमाथि पटक पटक कालोपत्रे गर्ने अनि भत्किरहने र फेरि ब्रेकर राखेर जोगाउन प्रयत्न गर्ने कुन देशको प्रविधि हो ? नागरिकहरुले सम्बन्धित निकायको जवाफ खोजिरहेका छन् । पुलको वल्लो–पल्लो भागमा किन धुलाम्मे छ, कसले गर्ने हो कालोपत्रे ? पुल बन्नुपर्ने त ग्वारखोलाको जस्तो होइन र ?
चारलेन सडक : समाचार नं. ४ । चारलेन सडकमा पनि जनताको चासोले ‘हाइट’ लिएको छ । सम्झौता भएको ३३ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको कुइरेपानी–हात्तीखौला चारलेन सडक निर्माण सम्झौता भएको दुई बर्षमा पनि गति लिन सकेन । चारलेन बनाउने नाममा भएको दुई लेनलाई पनि सिंगल लेनमा झारिएको छ । तथ्य इन्जिनियरीङले पेटी ठेकेदार पठाउन योग्यताको सर्टिफिकेट नखोजेर समस्या भएको हो कि ? पेटी ठेकेदार पेनाल्टी तिर्दै फेरिँदै गर्दा जनतालाई यहाँका स्थानीय सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने होइन र ?
हात्तीपाइले : यो स्वास्थ्य क्षेत्रको पाँचौ नम्बरको समाचार हो । यसपालि पनि जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खानेहरुको संख्या लक्ष्यअनुरुप पुगेन जतिसुकै सचेतनाका नाममा कार्यक्रमहरु गरिए पनि नागरिकहरुले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खाइदिएनन् । नियमित रुपमा खुवाउन सकेको भए ६ बर्षमै यो अभियान सकिने भए पनि हरेक नागरिकले नखाइदिँदा यो अभियान एघारौं बर्षसम्म लम्बियो । स्कुलमा औषधि पु¥याउँदा घरमा खाएको भन्छन्, घरमा लग्दा स्कुलमा खाएको भन्छन्, सबैभन्दा औषधि खुवाउन मुस्किल भनेको शिक्षित वर्गलाई नै रहेछ भनेर एकजना स्वास्थ्यकर्मीले बताएकी थिइन् । सायद ५५ प्रतिशतमाथि उक्लेन हात्तीपाइले खुवाउने अभियान ।
कोरोना : समाचार नं. ६ । कोरोना भाइरसको संक्रमण सीमावर्ती भारतबाट नेपालमा पनि व्यापक रुपमा फैलिएको छ । सायद परीक्षाको अन्तिम तयारीसँगै स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु अर्को सातादेखि घरमै बस्न बाध्य हुनेछन् । किनकि स्थानीय पालिकाहरुले फेरि पनि स्कुलहरुलाई क्वारेन्टाइन र क्याम्पसलाई आइसोलेसन बनाउने दाउ गरिरहेका छन् । किनकि कोरोना संक्रमितको समेत उपचार प्रवन्ध मिलाउने गरी संघीय सरकारले बजेट दिएर शिलान्यास भएका अस्पतालहरुमध्ये एउटा अस्पताल पनि दाङमा बनिसकेको छैन । स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन, बेलझुण्डी बीएएमएस क्याम्पसमा फेिर आइसोलेसन…।
नारायणपुर एयरपोर्ट : चुनावी नारा हो कि तुलसीपुरको विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा बजेट कटौती गर्न ? नारायणपुर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने त दश बर्षअघिको चुनावी नारा होइन र ? खोई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम सुरु भएको ? भट्याउँदैमा बन्ने हो र ? क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल । स्तरीय धावनमार्गको अभावसँगै ठूला जहाज नचल्दा दाङमा हवाइसेवा कुर्नुभन्दा नेपालगञ्ज भैरहवा जानु नै बेस । टरिगाउँको विमानस्थलको स्तरोन्नति सेतो हात्तीको दाँत हो र ?
कराते प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा रेफ्री रिफ्रेसर तालिम
घात र धोखाको आरोप दुःखद् : युनियन